Mashruucii Difaaca Muslimiinta Minnesota oo Hirgalay.
Inver Grove Heights- MN.
Maalinimadii Sabtida aheyd ee bishuna aheyd 17-ka ayaa waxaa xarunta MAS (Muslim American Society) faraceeda Minnesota lagu qabtay siminaar lagu tababarayey koox dhalinyaro rag iyo dumarba isugu jira, si loogu carbiyo ineey difaacaan xuquuqda Muslimiinta Gobolkan Minnesota.
Siminaarkan waxaa soo qabanqaabiyey sharciyaqaan Sh. Xassan Jaamici, mid kamid ah firfircoonayaasha ugu cad cad jaaliyadda muslimka ah iyo somaalidaba. Waxaana siminaarka Macallinka ahaa Brother Mahdi Bray oo ah madaxa Laanta (Freedom Foundation) ee ka tirsan isla (MAS) iyo Ra'eed Tayeh oo ahaan jiray maareeyaha warfaafinta ee Congress Woman Cynthia McKinney, isla markaana ah mid kamid ah kuwa ugu cad cad safka MAS.
Guud ahaan jawiga tababarku wuxuu ahaa mid aad u xasiloon. Waxaa tababarka loo qeybiyey saddex qeybood oo kala ah:
(a)Barashada Dowladda mareykanka iyo Siyaasadeheeda
(b)Dhex galidda bulshooyinka aan muslimka aheyn
(c) La dhaqanka warbaahinta.
Maadaama dadka la tababarayo laga doonayo ineey bartaan siyaabaha eey wax uga qaban lahaayeen xuquuqda muslimiinta ee mar mar la dafiro, ayeey tababarayaashu diirada saareen waaxyada kala duwan ee dowladda iyo sida ku haboon in loola dhaqmo. Qeybtan waxaa tababare ka ahaa Ra'eed Tayeh oo isugu inbadan la soo shaqeeyey qaar kamid ah xubanaha baarlamanka Mareykanka sida Cynthia McKinney oo aheyd xildhibaan laga soo dooran jiray Gobolka Georgia, aadna uga difaaci jirtay xuquuqda danyarta iyo muslimiintaba.
Mr. Ra'eed wuxuu inoo sharaxay muhimadda eey leedahay in qofka muslimka ahi barto sidii ula xiriiri lahaa siyaasiga matala degmada, waaxda, gobolka uu deggan yahay. Si "markaas uu ugala doodo arrimaha khuseeya islaamka iyo muslimiinta" ayuu yiri Ra'eed "Muslimiin badan baa ka baqda ineey siyaasiyiinta la xiriiraan, ama si sharci ah lacag ugu deeqaan marka la dooranayo, si uu hadhow ugu fuliyo arrimaha xasaasiga ah" ayuu ku nuuxnuuxsaday.
Garyaqaan: Xasan Jaamici
Mr. Ra'eed wuxuu aad ugu celceliyey in muslimiinta waddankani eey wax weyn ka dedeli karaan siyaasiyiinta hadii eey codkooda mideeyaan "Sida eey ilma adeeradeenba (yuhuuda) sameeyaan had iyo goor" ayuu yiri. Ra'eed wuxuu tusaale u soo qaatay Waaxda Hennepin County oo ah halka eey deggan yihiin muslimiinta ugu tirada badan gobolkan, oo dabcan soomaalina u badan. Wuxuu sheegay ineey hadii muslimiinta eeriyadaas codkooda la mideeyo eey suuragal tahay ineey guul siyaasadeed gaaraan.
Mahdi Bray, oo ah nin madowga waddankan ah, diinta islaamkana soo galay 27 sano kahor, isla markaasna caan ku ah qabanqaabinta banaanbaxyada waaweyn ee looga soo horjeedu ku xadgudubka xuquuqda aadanaha ayaa isna bare ka ahaa qeybtii labaad ee Seminar-ka oo looga hadlayey sida xiriir "Saaxiibtinimo" loola sameysta jaaliyadaha aan muslimka aheyn "iyadoo sharaftii islaamka aan meel looga dhaceyn" waa sida uu Mr. Bray u dhigaye. Mr. Bray wuxuu ku nuuxnuuxsday muhimadda eey leedahay in muslimiintu xiriir wanaagsan oo darisnimo la sameystaan "dadka diimaha kale" si eey muslimiinta ugu sahlanaato ineey siyaasiyiinta diimaha kale dhabba eey u soo maraan yeeshaan ayuu yiri Mr. Bray.
SAWIRO QAYB KAMID AH DADKII KA HADLAY XAFLADDA
Wuxuu soo tixay siyaabaha xiriir loola sameyn karo oo eey kamid yihiin: kamid noqoshada hogaanka ardayda jaamacadaha, ka qeybgalka gudiyada waalidiinta iyo macalimiinta ee goobaha waxbarashada hoose/dhexe/sare. Kamid noqoshada guddi hoosaadyada darisyada ee lagu nadaafadeeyo wadooyinka xaafadaha. Kaalmeynta iyo u gargaaridda dadka waayeelka ah ee lagula kulmo meelaha dadweynaha. Taageeridda mooshinada ama qorshooyinka siyaasadeed ee eey dadka qaar ee aan muslimka aheyni ku doonayaan ineey kaga hortagaan waxyaabo eey kamid yihiin: Ka ganacsiga jirka dumarka. Qamaarka IWM.
Guud ahaan, Seminaarku wuxuu ahaa mid dhalay miro eey ka faa'iideysan doonaa muslimiinta gobolkan. Isla markaana wuxuu baal cusub oo wata dardar horleh oo siyaasadeed u furi doonaa kumanaanka muslimiinta ah.
Inver Grove Heights- MAS Center
Faafin: SomaliTalk | May 24, 2003